एउटै मन्त्रीका १७ सल्लाहकार, राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष सचिवालयको कब्जामा, को को छन् सचिवालयमा ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
एउटै मन्त्रीका १७ सल्लाहकार, राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष सचिवालयको कब्जामा, को को छन् सचिवालयमा ?
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सचिवलयमा कार्यरत आफ्ना सबैजसो कर्मचारीलाई विभिन्न निकायको जिम्मा दिएको बुझिएको छ । मन्त्री पोखरेलले आफूलाई भेट्न आउने मन्त्रालयका सहसचिव लगायतका उच्च पदाधिकारीलाई सचिवालय सदस्यमार्फत काम गर्न आउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । ‘आफू वेफुर्सद रहेकाले सचिवालयको सदस्यमार्फत काम गर्नु भन्दै पन्छिने गर्नुभएको छ’, एक उच्च स्रोतले भन्यो । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
विरोधको बीच प्रतिनिधिसभाकै शैलीमा चिकित्सा शिक्षा बिधेयक राष्ट्रियसभामा पनि पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएजस्तै गरी चिकित्सा शिक्षा बिधेयक राष्ट्रियसभामा पनि पारित गरिएको छ । […]
दार्चुला । झुटो तथ्यांक देखाएर गत वैशाखमा दार्चुला जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरियो । तर, […]